Obama Oo Khudbaddii U Dambeysay Jeediyey
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, argagixisada iyo siyaasadda dibedda.
Isaga oo jeediyey khudabaddiisii toddobaad ee qaranka, ahaydna tiisii ugu dambeysay, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray, waxaana uu diiradda saaray mustaqbalka.
Obama oo hortaagan xubnaha congress-ka Mareykanka, ayaa u muquday nin degan, oo niyadsan, wuxuuna tusmeeyey baahida loo qabo in Mareykanka uu ka bogsoodo siyaaasadda sida qotoada dheer u kala qeybisay Mareykanka.
Obama waxa uu sidoo kale mararka qaar si aad ah u dhaleeceynayey xubnaha Jamhuuriga ee u baratamaya sidii ay isaga ugala wareegi lahaayeen xafiiska.
Waxa uu si gaar ah u dhaliilay “Siyaasadda dadka ku beegsatay sababo la xiriira jinsigooda iyo diintooda”, hadalkaas oo loo arkay inuu ku weeraray Donald Trump oo doonaya in muslimiinta laga mamnuuco Mareykanka.
“Marka siyaasiyiintu ay aflagaadeeyaan muslimiinta, marka masaajidada la weeraro, ama ciyaalka la harowsado, taasi nagama dhigeyso ammaan, waana qalad” Ayuu yiri madaxweyne Obama.
Obama waxa uu sidoo kale kuwa isaga kasoo horjeeda ku weeraray arrimaha dhaqaalaha, isaga oo leh “Qof kasta oo ku doodaya in dhaqaalaha Mareykanka uu hoos u dhacayo, waa qof ku sugan xaalad qiyaaali ah”.
Isaga oo ka hadlayey arrimaha dibedda, Obama waxa uu qiray halista kooxaha argagixisada ah, sida Daacish oo caalamka ka fulisay weeraro badan oo dhimasho leh. Hase yeeshee waxa uu sheegay in xagjiriinta Islaamiga ah aysan halis ku ahayn jiritaanka caalamka, isaga oo u digay kuwa ornaya in dagaalkii saddexaad ee dunida uu soo socdo.
Obama ayaa xafiiska ka tagaya bisha January ee 2017, ayada oo Mareykanka uu dooranayo madaxweyne cusub bisha November ee 2016.
Haddaba qodobada ugu muhiimsanaa ee khudbadda madaxweyne Obama ay taabatay iyo sida ay u qaabayn karto saamaynta maamulkiisu kaga tagayo Maraykanka iyo guulaha uu gaadhay xilligii uu talada hayey waxaan ka waraysanay oo nala fallanqaynaya Khabiir Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Marayanka iyo kuwa caalamkaba. Waxa uu u warramay Falastiin Axmed Iimaan.
Fallanqeynta Khudbadda Obama
Madaxweyne Xasan oo Furay Shirka Jowhar
Qarax 10 Qof Ku Dilay Magaalada Istanbul
Dad Faafinayey Shiico oo Hargeysa lagu Xukumay
Wareysi: Guddoomiyaha Baarlamanka Somaliland
Sicir Barar Xooggan Oo Ka Jira Somaliland